Ziziphi iintlobo zanamhlanje eziya kunceda ndiphucule i-SEO yam?
Kuhlala kukho izinto ezininzi eziphambili kunye nezihlakaniphile endisebenza ngazo ukuphucula i-SEO yam. Njalo inyanga ndiyifumana ixesha elifanelekileyo lokwenza uvavanyo lwehlabathi locwangciso lwendlela yokuSebenza kweeNjini. Ngale ndlela ndinokuqiniseka ukuba indlela endihamba ngayo ukuphucula i-SEO yam ihlangabezana neenjongo zam eziqhelekileyo ezifana nokuqinisa igunya lam kwiwebhusayithi, ukukhulisa ubukho bam kwi-intanethi, kwaye ekugqibeleni ndandisa inani lam nekhasi. Ukuba unomdla ukwazi ngakumbi kwiindlela eziphambili kakhulu kodwa ezingenakunzima kakhulu kwi-SEO ka-2017, uhlala kwindawo efanelekileyo - door access control system price. Ngezantsi ziingcebiso kunye nezicwangciso ezingcono kakhulu ukuba ndifumene ngokwaneleyo ukuphucula i-SEO yam, kwaye ngenxa yoko i-website kunye nesebenza ngokubanzi jikelele kweshishini - musa nje ukukhawuleza ukuhlawula ixesha elide kulo, kwaye uya kuhlala uphezulu kwiGoogle uludwe lweziphumo zophando. Ngoko, masihla kwii-trendiest SEO izixhobo ze-2017!
Ungalokothi uyeke ukugcina ubungqina bakho obuqinileyo kwi-intanethi
Kuza ngaphandle kokuthi ubukho bakho bekhompyutheni buchitha kude kwiwebhu. Ndiyathetha apha ukuba ngokuqhelekileyo ukuba yonke imisebenzi yesondlo iyakucinywa, okanye ingatshatyalaliswa ngokupheleleyo yinkoliso yethu. Masijongane nayo - esinemifanekiso kwiGoogle, umzekelo, kodwa ngoku ngaphandle kokusetyenziswa okusebenzayo, njengokuhlaziya okanye ukwabelana ngomxholo. Yintoni omele uyenze ngokukhawuleza - khangela ukuba iinkcukacha zakho zichanile kwiikhonkco zeWeb kwi-intanethi kwaye uzimisele ukuba khona kwakho kwi-inthanethi. Ngale ndlela, ndandisebenzisa ukuphucula i-SEO yam kunyaka ngokwenza i-spreadsheet yokugcina iliso lam phambi kwikhompyutha, ixhaswa ngetekisi zenyanga. Kubonakala kulula, ewe? Kodwa uthembele kum, okuya kuba luncedo kakhulu, ubuncinci kumbono okhuphiswano lwakho. Ndiyicinga, ininzi yabo (njengokuba ukhona, nje imizuzu emibini edlulileyo) sele uyilibale le nto ibonakala ngokubonakalayo edala.
Gcina ungeze ixabiso elongezelelweyo kubaphulaphuli bakho
Nantsi ndiya kukubonisa ukuba ukongezwa kwexabiso kukude kunokuba nekhwalithi yemfanelo. Ngo-2017, ukongezwa kwexabiso elithile kuthetha ukuba kufuneka ubeke ukuqonda okunzulu kunabo bonke abantu abajolise kuzo, iinjongo zabo, kunye neenjongo zabo, nje ukuba banike oko bafuna nangaphambi kokuba bacinge ngako. Ndiyathetha apha kufuneka ukhangele umxholo wakho ukufumana izinto ezintle kakhulu ezithandekayo kubaphulaphuli bakho. Emva koko, funda ngakumbi kwaye uzicinge nje ngokuba ngumthengi. Yiyiphi imibuzo oyifunayo? UMthetho ngokukhawuleza kwaye ufumane ibhalansi efanelekileyo phakathi kwexesha kunye nexabiso. Ukwenza njalo, uya kubona i-niche yakho yeevenkile ekhoyo phantsi kokunyuka okukhulu. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ukukhwela ngaphandle akusisigqibo esenziwe kakuhle. Ungaze uphelelwe ngumgangatho.
Ukusebenza kanzima kumxholo wakho wokubonwa ngamava
Ezinye iinyanga ezidlulileyo, ndabuyisela ukuhlaziywa kwakhona kwento ebonakalayo yokuphucula i-SEO yam ngokusemandleni akhe indlela. Ndiyingozi - namhlanje umxholo wakho obonakalayo ubalulekile kwiGoogle ngaphezu kwanini ngaphambili! Ngoku kuthe kwathiwa ukuba nefuthe ngqo ngokubhekiselele kumava omsebenzisi angcono kodwa ukukhangela kwakhona. Ngenhlanhla, unokwenza ngoku ngoku, njengoko umsebenzi ungagqitywa kakuhle ngenye imini. Okokuqala, ndincoma ukuphonononga izihloko zakho, ukujonga nokuba ungeze iikopi ze-alt, imethadatha okanye amanye amagama angundoqo ayimfuneko. Zibuze yona iipropati zakho zokuyila zizahlukileyo kwaye zithatha amehlo. Emva koko, hlola ubungakanani kunye nobukhulu bazo zonke iifayile ze-multimedia ezigcinwe kwiwebhusayithi yakho ukuqinisekisa ukuba isivinini sakho sokulayisha isantya senza kakuhle. Emva koko, ndincoma ukuba sicinge ngokusebenza ekwandiseni umxholo wevidiyo, njengoko ngoku kubonakala kubaluleke kakhulu kwiGoogle ukubonisa iwebhusayithi yakho kuhlu lwazo zophando.